यसवर्ष निक्कै खत’रना’क मनसुन आउँदै, के-के छन् खत’रा ! मौसमविद्हरुको यस्तो चेता’वनी, भिडियो हेर्नुहोस (जानकारीका लागि सेयर गराै) - Nepali in Australia
June 15, 2021 autherLeaveaComment on यसवर्ष निक्कै खत’रना’क मनसुन आउँदै, के-के छन् खत’रा ! मौसमविद्हरुको यस्तो चेता’वनी, भिडियो हेर्नुहोस (जानकारीका लागि सेयर गराै)
बुढीनन्दानगरपालिका ३ की एक महिलालाई खोलाले बगाउँदा बेपत्ता भएकी छन् । बेपत्ता हुनेमा सोही नगरपालिका ३ का मनबहादुर लुहारकी ३५ वर्षीया श्रीमती मोतीकला लुहार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी निरीक्षक धनदेव साउँदले जानकारी दिएका छन् ।
सोमबार बिहान धानको बेर्ना गोढ्न जाने क्रममा चिप्लिएर बड्डीगाड खोलाले बगाएपछि मोतीकला बेपत्ता भएकी हुन । बेपत्ता महिलाको खोजीकार्य भइरहको प्रहरी निरीक्षक साउदले बताए। त्यसैगरी त्रिबेणी नगरपालिका ५ कम्नीमा एक ११ वर्षीय बालक बेपत्ता भएका छन्।
लगाताको वर्षाका कारण गाउँनजिकैको भलखोला उर्लेर आएपछि हेर्न जाने क्रममा घुर्या बुढाका अन्दाजी १०/११ वर्षीय छोरा वेपत्ता भएको त्रिवेणी नगरपालिका प्रवक्ता प्रेम थापाले जानकारी दिए।
घटनास्थलमा प्रहरी टोली गएको छ । टेलिफोन अवरुद्धका कारण प्रहरी टोलीसमेत सम्पर्कमा नरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै वर्षात् बुढीनन्दानगरपालिका ८ मा एक घर भत्किएको छ । स्थानीय खेमराज कठायतको घरको छानो भत्किएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
घर भत्किएको तर अन्य मानवीय क्षति नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता धनदेव साउँदले जानकारी दिएका छन् । घटनास्थलमा प्रहरी पुगिसकेको र पीडित परिवारलाई नजिकै आफन्तकोमा व्यवस्थापन गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।